नर्बेमा पड्दै गरेकी ५ बिदेशी भाषा बोल्न सक्ने नेपाली चेलीको मुख्य भूमिका रहेको Hollywood(English) फिल्म डिसेम्बर १५ तारिकमा रिलिज हुदै – mero sathi tv
On १३ मंसिर २०७४, बुधबार १०:५६
९४ मिनेटको हलिउड फिल्ममा “जोइ”को रोलमा मुख्य रोलमा अभिनय गरेकी नेपाली चेलीको यो फिल्म धेरै नै आशा गरिएको फिल्म मद्देमा पर्दछ । हलिउडमा सुपरिचित नाम भए पनि अमृता आचार्यल हामी माझ त्यति परिचित पात्र हैन तर दिन प्रतिदिन हलिउड मा आफ्नो प्रभाव छाड्दै छिन ।
सन् २०११ मा निर्माण गरिएको द गेम ओफ थ्रोन संगै थुप्रै शोहरु मा आफ्नो अभिनय देखी सकेकी अमृता आचार्य को हुन् त ?
उनै “इरि” को भूमिकामा देखिएकी नेपाली चेली हुन् अमृता आचार्य जो अहिले बिदेशी भुमिमा आफ्नो कला मार्फत नेपाली हुनु को परिचय दिई रहेकी छिन । नर्बेको टेलिभिजन कार्यक्रम गेम अफ थ्रोन को दोस्रो एपिसोडमा “इरि” पात्रको भएको देखाईएको थियो जसलाई धेरै दर्शकले हेर्न चाहेका थिएन ।
इरि को भूमिकामा अब्बल देखिएकी अमृता लाई सबैले पछी सम्म हेर्न चाहेका थिए । उही अमृता आचार्यको बारेमा हामी केहि थप जानकारी दिने प्रयास गरेका छौं ।
नेपाली बाबु डा . गणेश आचार्य र युक्रेनी आमाको कोख बाट नेपालमा जन्मीएकी अमृता आचार्य नर्बेको एक स्थापित कलाकार हो । ललितपुरको पाटन हस्पिटलको जागिर छोडेर बाबु डा. गणेश आचार्यले ६ वर्षाको उमेरमा अमृतालाइ संगै बेलायत लागेका थिए । पछि बाबा डा. गणेश आचार्यले नर्बेमा प्रोफेसर काम गर्नु भयो ।
यसै समयमा अमृताले आफ्नो बिध्यालय शिक्षा पुरा गरिन र उच्च शिक्षा संगै आफ्नो कलालाइ निखार्न बेलायत गईन र सन् २००९ सालमा Academy of Live and Recorded Arts बाट तालिम पुरा गरिन र अभिनय मा लागिन । कहिले काठमाण्डौ कहिले बेलायत, युक्रेन नर्बे गर्दै हुर्केकी अमृता नेपाली, युक्रेनियन , रसियन, अंग्रेजी र नर्बेजियन भाषा बोल्न सक्दछिन ।
I Am Yours (2013), Dead Snow: Red Vs. Dead (2014), Game of Thrones(2011-2012), Frikjent(2016), The Good Karma Hospital(2017) र Welcome to Curiosity (२०१७) आदि मा अमृता आचार्य ले अभिनय गरेकी छिन ।
सन् १९८७ जुलाई ३१ मा जन्मिएकी अमृता ५ फिट २ इन्च अग्ली छिन भने गेम अफ थ्रोन मा गरेको अभिनय लाइ सर्बाधिक रुचाइएको पाइन्छ भने “Welcome to Curiosity” आउदो डिसेम्बर र प्रदर्शन हुदै छ ।
९४ मिनेटको उक्त फिल्ममा अमृताले जोइको रोलमा मुख्य भूमिका गरेकी छिन। सो फिल्म बेन पेकरिंग ले निर्देशन गरेका हुन् ।
भविष्यमा यस्तै राम्रो अभिनयहरु दिएर अगडी बदना सकुन , अमृता आचार्यलाई हार्दिक शुभाकामना
अमेरिकी विश्वविद्यालयमा डीन नियुक्त हुने प्रथम नेपाली महिला, प्रख्यात नेपाली पत्रकारकी छोरी